သမီးငယ်လေးအတွက် နို့ဘူးကိုယ်တိုင်ဖျော်ပေးရလို့ ပျော်နေတဲ့ အာဇာနည် – Suehninsi
သမီးငယ်လေးအတွက် နို့ဘူးကိုယ်တိုင်ဖျော်ပေးရလို့ ပျော်နေတဲ့ အာဇာနည်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် အာဇာနည်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ အသည်းကွဲသီချင်းများနဲ့ သိမ်းပိုက်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်.။ တစ်ပုဒ်ဆို
ဆိုသလောက်ကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲထိရောက်အောင် သီဆိုနိုင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အာဇာနည်ကတော့ မော်ဒယ် ဝမ်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး သားနှစ်ယောက် နဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ကာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူပါ.။ လိမ္မာပြီး သိတတ်တဲ့ သားနှစ်ယောက်ကြောင့်လည်း
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရတဲ့ အာဇာနည်ကတော့ မေလ (၁၄)ရက်နေ့မှာ တတိယရင်သွေးချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။. သမီးလိုချင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒလေးတွေပြည့် ကာ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လေ့ရှိပါတယ်.။ ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့မှာတော့ ချစ်ရတဲ့ သမီးလေးအတွက် နို့ဘူး ကိုယ်တိုင် ဖျော်ပေးရလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့
ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို “Friday” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ မိုင်ဒေးမှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ သမီးလေးအတွက် အာဟာရဖြစ်စေမယ့် နိုးဘူးလေးကိုကိုယ်တိုင် သေချာဖျော်ပေးရလို့ အာဇာနည်ကတော့ ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ပုံပါပဲနော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးငယ်လေးအတွက် နိုးဘူးကိုယ်တိုင်ဖျော်ကာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အာဇာနည်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီးပွီး လူကွိုကျမြားတဲ့ အဆိုတျောတှထေဲက တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈတဲ့ အဆိုတျော အာဇာနညျကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့ လိုကျဖကျလှနျးတဲ့ အသညျးကှဲသီခငျြးမြားနဲ့ သိမျးပိုကျထားသူပဲဖွဈပါတယျ.။ တဈပုဒျဆို
ဆိုသလောကျကို ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲထိရောကျအောငျ သီဆိုနိုငျတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ.။ အာဇာနညျကတော့ မျောဒယျ ဝမျးနဲ့ အိမျထောငျကခြဲ့ပွီး သားနှဈယောကျ နဲ့ သမီးလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျကာ ပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနသေူပါ.။ လိမ်မာပွီး သိတတျတဲ့ သားနှဈယောကျကွောငျ့လညျး
ပြျောရှငျကွညျနူးနရေတဲ့ အာဇာနညျကတော့ မလေ (၁၄)ရကျနမှေ့ာ တတိယရငျသှေးခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။. သမီးလိုခငျြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆန်ဒလေးတှပွေညျ့ ကာ ခဈြမဝဖွဈနတေဲ့ အကွောငျးလေးတှကေို သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလရှေိ့ပါတယျ.။ ဇှနျလ (၅)ရကျနမှေ့ာတော့ ခဈြရတဲ့ သမီးလေးအတှကျ နို့ဘူး ကိုယျတိုငျ ဖြျောပေးရလို့ ပြျောရှငျနတေဲ့
ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို “Friday” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ မိုငျဒေးမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ သမီးလေးအတှကျ အာဟာရဖွဈစမေယျ့ နိုးဘူးလေးကိုကိုယျတိုငျ သခြောဖြျောပေးရလို့ အာဇာနညျကတော့ ပြျောရှငျမဆုံးဖွဈနတေဲ့ ပုံပါပဲနျော..ပရိသတျကွီး.။ ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးငယျလေးအတှကျ နိုးဘူးကိုယျတိုငျဖြျောကာ ပြျောရှငျနတေဲ့ အာဇာနညျရဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော.။
အစ်ကိုဖြစ်သူ ဒွေးက ရိုက်ကွင်းတွေမှာ အောက်ခြေကစပြီး အစစအရာရာ ပံ့ပိုးပေးခဲ့တာကို သတိရနေတဲ့ သားညီ
အဖေဖြစ်သူနဲ့ စိတ်ကြီးတာချင်းတူလို့ အတော်ညှိခဲ့ရပေမယ့် အဖေ့မေတ္တာကြောင့် အားအရမ်းရှိရတယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး
အဖေဖြစ်သူ ဦးမန်းဝင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေလုံးဝမကောင်းလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သမီးဖြစ်သူ ကြည်ဖြူမန်းဝင်း